प्रदेश १ मा ४६ जनाको नमूना संकलन, ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ – KhabarPurwanchal
प्रदेश १ मा ४६ जनाको नमूना संकलन, ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
खबर पूर्वाञ्चल, १८ चैत्र २०७६, मंगलवार १८:३४
विराटनगर /प्रदेश १ बाट कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का तीन दर्जन बढीको नमूना संकलन गरिएको छ ।
अहिलेसम्ममा १० महिलासहित ४६ जनाको नमूना संकलन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश१ का प्रवक्ता डा.सुरेश मेहताले जानकारी दिए । उनका अनुसार झापाबाट ५ जना, मोरङबाट ७ जना, सुनसरीबाट २५ जना, धनकुटाबाट १ जना, ते¥हथुमबाट २ जना , सोलुखुम्वुबाट २ जना, उदयपुरबाट १ जना र पाँचथरबाट ३ जनाको नमूना संकलन गरिएको जनाए ।
नमूना संकलन गरिएका मध्ये ३० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । १६ जनाको रिपोेर्ट आउन बाँकी रहेको प्रवक्ता डा. मेहताले बताए । यस्तै प्रदेश १ मा अहिलेसम्ममा ७ जना आईसोलेसनमा भर्ना भएका छन् । ४ महिलासहित ७ जना आईसोलेसनमा रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सोलुमा १, उदयपुरमा २ , पाँचथरमा ३ र ताप्लेजुङबाट १ जना आईसोलेसनमा भर्ना भएका हुन । आईसोलेसनमा भर्ना भएका मध्ये २ जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता डा. मेहताले बताए ।
प्रदेश १ मा हालसम्म ३५ वटा अस्पतालका ३ सय ६१ वटा आईसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा रहेका छन् । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा अस्पतालहरुलाई कोरोना नियन्त्रण संवन्धि विभिन्न सामाग्रीहरु वितरण गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज पीपीई सेट २ सय ९७ थान, आईआर थर्ममिटर १६ थान, सर्जिकल मास्क २२ हजार १ सय ५० थान, ग्लोब्स १८ हजार ५ सय २६ थान, ह्याण्ड सेनिटाईजर ८ सय १८ थान र पीपीई गाउन ३५ वटा वितरण गरेको प्रवक्ता डा. मेहताले बताए ।